Izindaba - Ingabe Amathiphu wePipette Ahluziwe Ayakuvimbela Ngempela Ukungcola Kwama-cross and Aerosols?
Ikhava Yesilinganiso Sokushisa
Indlebe Otoscope Specula
Ingabe Amathiphu wePipette Ahlungiwe Ayakuvimbela Ngempela Ukungcola Kwama-cross and Aerosols?
Elebhu, kwenziwa izinqumo ezinzima njalo ukunquma ukuthi yikuphi okungcono kakhulu kokwenza izivivinyo ezibucayi nokuhlola. Ngokuhamba kwesikhathi, amathiphu we-pipette ajwayele ukufanela amalebhu emhlabeni wonke futhi ahlinzeka ngamathuluzi ukuze ochwepheshe nososayensi babe nekhono lokwenza ucwaningo olubalulekile. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi njengoba i-COVID-19 iqhubeka nokusabalala kulo lonke elase-United States. Izazi ze-Epidemiologists kanye ne-virologists zisebenza ubusuku nemini ukuze zithole ukwelashwa kwaleli gciwane. Amathiphu we-pipette ahlungiwe enziwe ngopulasitiki asetshenziselwa ukutadisha igciwane futhi amapayipi engilazi ake aba makhulu manje asebushelelezi futhi azenzekelayo. Ingqikithi yamathiphu ayi-10 epulasitiki asetshenziselwa ukwenza isivivinyo esisodwa se-COVID-19 njengamanje futhi iningi lamathiphu asetshenzisiwe manje anesihlungi kuwo okufanele sivimbe ama-aerosol ayi-100% futhi sivimbele ukungcoliswa okuwela lapho kwenziwa isampula. Kepha zingakanani lezi zithiphu ezibiza kakhulu futhi ezibiza imvelo ezisiza kakhulu amalebhu ezweni lonke? Ngabe amalebhu kufanele anqume ukulahla isihlungi?
Ngokuya ngocwaningo noma isivivinyo esiseduze, amalebhu nezikhungo zocwaningo zizokhetha ukusebenzisa amathiphu wepipette angahlungiwe noma ahlungiwe. Amalebhu amaningi asebenzisa amathiphu ahlungiwe ngoba akholelwa ukuthi izihlungi zizovimbela wonke ama-aerosols ekungcoleni isampula. Izihlungi zivame ukubonwa njengendlela eyonga izindleko yokuqeda ngokuphelele iminonjana yokungcola esampula, kodwa ngeshwa akunjalo. Izihlungi zamathiphu we-polyethylene pipette akuvimbeli ukungcoliswa, kepha kunalokho kubambezela kuphela ukusabalala kokungcola.
Udaba lwakamuva lweBiotix luthi, “[igama] isithiyo kancane liyiphutha kwezinye zalezi zeluleko. Amathiphu athile wokugcina aphezulu kuphela ahlinzeka ngesithiyo sokuvala seqiniso. Izihlungi eziningi zinciphisa uketshezi ukungena emgqonyeni wepipette. ” Izifundo ezizimele zenziwe kubhekwa ezinye izindlela zokuhlunga amathiphu nokusebenza kwazo kuqhathaniswa namathiphu angahlungi. I-athikili eyashicilelwa ku-Journal of Applied Microbiology, eLondon (1999) yafunda ngokusebenza kwamathiphu wokuhlunga we-polyethylene lapho ifakwa ekugcineni kokuvulwa kwesigaxa sepipette tip uma kuqhathaniswa namathiphu angahlungiwe. Ekuhlolweni kwe-2620, amasampula angama-20% akhombise ukungcoliswa kwe-carryover ekhaleni le-pipettor lapho kungasetshenziswa isihlungi, kwathi amasampula ayi-14% angcoliswa lapho kusetshenziswa ithiphu yesihlungi se-polyethylene (PE) (Umfanekiso 2). Ucwaningo luthole nokuthi lapho uketshezi olunemisebe noma i-plasmid DNA kufakwa amapayipi kungasebenzisi isihlungi, ukungcoliswa komgqomo wepayipi kwenzeka phakathi kwamapayipi ayikhulu. Lokhu kukhombisa ukuthi yize amathiphu ahlungiwe ehlisa inani lokungcola okuwela kusuka kwelinye ithiphu le-pipette kuya kwelinye, izihlungi azimisi ukungcola ngokuphelele.
Ngemizamo yokubekezelela kule minyaka embalwa edlule, i-ACE ikhule yaba ngomunye wabakhiqizi abahamba phambili kanye nabaphakeli bezinto ezisetshenziswayo zaselebhu nezokwelapha.Sizoqhubeka nokuqinisekisa amakhasimende ethu ngemikhiqizo nezinsizakalo ezihamba phambili.
ISuzhou ACE Biomedical Technology Co, Ltd.